Inona no atao mba ho fiaraha-monina mahafinaritra ny ao an-tokantrano ao?… – FJKM Ambavahadimitafo Inona no atao mba ho fiaraha-monina mahafinaritra ny ao an-tokantrano ao?… |
Inona no atao mba ho fiaraha-monina mahafinaritra ny ao an-tokantrano ao?…
Miankina amin’ny tsirairay ny hisian’ny fahombizana amin’izany na tsia. Aza atsipy amin’ny ray aman-dreny fotsiny ny fahadisoana. Ary ny ray aman-dreny koa tsy tokony hanameloka bontolo fotsiny izao ny zanaka.
Karazana tokantrano inona re no misy anao ? Matetika dia ny fifampiresahana (dialogue) no miantoka ny fahombiazan’ny fiainan-tokantrano. Koa tandremo ireto fomba izay manimba ny fifampiresahana ireto :
Firesahana be loatra, Firesahana amin’ny feo avo, Fiolakolahana, tsy miteny mahitsy, Fialàna bala, Fitompoan-teny fantatra …
Tsi-firesahana firy, Fimongimongena, Fitenenana mandratra, Fanodinan-dresaka, Famaliana bontana …
Ireo zavatra ireo no mitranga dia satria adinontsika fa ny fifampiresahana dia fifamindrana hafatra; izany hoe tsy maintsy misy ny fiezahan’ny tsirairay hahazo izay lazain’ny anankiray.
Tsarovy koa fa manan-danja ny TENY lazainao na dia 7%-’ny zavatra tafiditra ao amin’ny fifanakalozana (communication) fotsiny aza ny teny. Mieritrereta, fidio ny teny ampiasainao. Ary milazà ny MARINA.
Ny 38%-’ny resaka dia miankina amin’ny fomba itenenanao ireo teny ampiasainao (ton de la voix). Afaka miteny aho hoe: “Tia anao aho, ry Neny”. Saingy mety miova tanteraka ny tiako lazaina arakaraka ny fomba itenenako azy sy ny feoko.
Ny 55%-’ny resaka dia miankina amin’ny fihetsika asehoko an’ilay olona miresaka amiko (message non-verbal). Ny vatantsika dia manam-pahefana be lavitra hampita izay ao am-pontsika noho ny teny sy ny fomba itenenantsika azy.
Ohatra : sady milaza aho fa faly mandray an’ilay olona nefa ny tarehiko montotra dia montotra no sady vinitra. Hino ahy ve izy fa faly aho?
Farany, ekena fa tsy maintsy misy ny olana ao an-tokantrano ao. Ny fomba amahantsika azy no hiantoka ny hahatokantrano sambatra azy na tsia. Tranga efatra no isehoan’ny famahana ny olana ao an-trano ao :
1. Tsy firaharahiana ny olana sy ny fifandraisana
Samy tezitra ny roa tonta. Tsy misy fifanajana sy fitiavana. Samy mirintona lasa na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Simba ny fifandraisana ary tsy voavaha ny olana.
2. Fijerena akaiky ny olana saingy tsy firaharahiana ny fifandraisana
Ny ray aman-dreny no tsy manaiky ho resy eto. Izy no manao ny lalàna. Mahatsiaro ho voahenjika ny zanaka. Tsy maintsy mankato izy saingy rava ny fifampitokisana.
3. Tsy firaharahiana ny olana fa fitandroana ny fifandraisana
Manaiky ho resy eto ny ray aman-dreny mba hitazonana ny fihavanana amin’ny zanaka. Tsy afaka manoro hevitra, mitarika, miahy araka ny tokony ho izy intsony izy ireo. Ampihantaina fahatany ny zanaka ka toa tsy mahay manaja ireo nahitàna masoandro intsony.
4. Firaharahiana ny olana sy ny fifandraisana
Tsy andosirana ny olana misy saingy asandratra ambony koa ny fihavanana. Mitaky fotoana, fitiavana, ary fifanajana ny fanatratrarana io tanjona io. Ilaina koa ny fahavononana eo amin’ny roa tonta mba hifandefitra fa tsy hifanararaotra.
Andramo kely ange ity tranga fahaefatra ity e. Ho gaga ianao tanora fa hisokatra aminao i Dada sy Neny. Tsarovy fa mba efa tanora tahaka anao koa izy ireo, ary ho ray aman-dreny koa ianao rahatrizay. Samy mety ho diso daholo ny roa tonta. Ny ilaina dia ny fiarahana miatrika sy mamaha olana amin’ny fifankatiavana sy fifampitokisana.
in Gazety “AINA” Avrily 93